चर्चित अभिनेत्री सुरेखा सिकरीको नि’धन ! – Taja Khawar
चर्चित अभिनेत्री सुरेखा सिकरीको नि’धन !
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०२, २०७८ समय: ११:२७:५६
काठमान्डौ : चर्चित टिभी शो बालिका वधु लगायत थुप्रै ठुला शो र फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सिकरीको ७५ बर्षको उमेरमा नि’धन भएको छ ।
शुक्रबार बिहान उनको नि’धन भएको हो । यस खबरले भारतमा बिभिन्न सञ्चार माध्यमले जानकारी गराइरहेका छन् ।अभिनेत्री सुरेखा लामो समय देखि अ’स्वस्थ थिइन् । २०२० मा उनलाई म’स्तिष्कघा’त भएको थियो ।
तिन पटक नेस्नल अवार्ड जि’तेकी सुरेखाको नि’धनले बलिउड तथा टिभी क्षेत्रमा गहिरो असर परेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको नि’धन प्रति दु:ख व्यक्त भैरहेको छ । मानिसहरु सुरेखाको निध’न प्रति निकै भाबुक बनेका छन ।
अहिले सम्म उनको अभिनय यात्रा अविस्मरणीय छ । उनि अभिनय क्षेत्रमा क’डा मेहेनती र राम्रो अभिनय प्रदर्शन गर्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यस शो निकै रुचाइने टिभी सिरियलमा पर्छ । हिन्दि भाषाको चर्चित टिभी सिरियल बालिका वधु केहि समय पहिले देखि नेपालि भाषामा पनि हेर्दै आइएको थियो । अहिले यस सिरियलको नेपालमा निकै लोकप्रियता बढेको छ ।
नेपालमा यस सिरियल आनन्दीको नाम बाट प्रशारण हुदै आएको छ । सुरेखाले तीन पटक राष्ट्रिय पुरस्कार जितेकी थिइन् । सामाजिक संजालमा बलिउड कलाकार, टेलिभिजन कलाकार र फ्यानहरुले उनीप्रति श्र’द्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।
सुरेखाले थिएटर, टेलिभिजन र फिल्ममा पनि काम गरेकी थिइन् । १९७८ मा फिल्म किस्सा कुर्सी का बाट सुरेखाले अभिनयमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।उनलाई तीन पटक सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कार दिइएको थियो ।
यो अवार्ड फिल्म तमस (१९८८), मम्मो (१९९५) र बधाइ हो (२०१८) का लागि यो पुरस्कार दिइएको थियो । यसबाहेक उनले १ फिल्फेयर अवार्ड, १ स्क्रिन अवार्ड र ६ इण्डियन टेलिभिजन एकेडेमी अवार्ड जितेकी छिन् ।
Last Updated on: July 17th, 2021 at 11:28 am